Ufuna ifulethi elihlanzekile eliyimfihlo, ukufinyelela ngokushesha olwandle, ingadi enhle ongayichitha, zonke izinsiza eziyisisekelo (i-ac, i-wc, i-wifi, ikhishi), uhambo olulula lwe-15-20min ukusuka enkabeni yedolobha kanye nomsingathi onomomotheka futhi ukulangazelela ukusiza? Apt1 yiyo!
Ifulethi eliliseceleni lomgwaqo elinethezekile. Ngaphakathi uzothola indawo yokuhlala ehlanzekile, ehlelekile futhi ehloniphekile ngempela. Igumbi lekhishi elinefriji liyatholakala. Ngaphezu kwalokho leli fulethi linegumbi lokugezela elineshawa ne-wifi yamahhala. Ifulethi linemibhede emibili eyodwa. Njengoba kushiwo ngaphambili i-Apt1 iyifulethi eseceleni komgwaqo okusho ukuthi uzothola umsindo othile womgwaqo ngaphakathi efulethini, kuya ngokuthi ulala kangakanani kungase kucasule uma uhlela ukuhlala isikhathi eside. Bengingahlinzeka ngama-earplugs mahhala nakanjani uma kudingeka futhi ngiceliwe. Uma ungumuntu ongalali kahle ngingakuncoma kakhulu ukuthi ubhukhe ifulethi elingasolwandle.
Inombolo ye-Apartment 1 itholakala eceleni komgwaqo wesakhiwo kodwa ngaphakathi kukhona ukufinyelela okuqondile ezingeni lengadi lapho ungase uphumule futhi ujabulele ngokuqhubekayo.
Imizwa yokuba nesidlo sasekuseni sakho engadini ubukele ilanga liphuma ngaphezu kwe-fortezza isithombe ongasoze wasikhohlwa.
Ifulethi lihlanzeke kakhulu, inketho efanelekile yokuhlala kwakho. Ngaphezu kwalokho sinikeza isevisi yokuhlanza njalo ezinsukwini ezi-2 noma ezi-3, mahhala!.
IMamangakis Apartments iqhele ngamakhilomitha angu-1,5 ukusuka enkabeni yedolobha kodwa kuwuhambo oluhle noma ukugibela ibhayisikili lakho, usebenzisa umzila omusha wamabhayisikili emigwaqweni yedolobha. Phakathi kwebanga elingu-100-150m uzothola indawo yokupaka, izindawo zokudlela ezihamba phambili edolobheni (nasolwandle), indawo ye-souvlaki, isevisi yezithunywa kanye ne-internet cafe ngesidlo sakho sasekuseni nezinye izidingo.
Kunesitobhi sebhasi khona kanye ngaphandle kwezindlu zethu ezikuyisa enyuvesi kanye nesinye isitobhi sebhasi esiwela umgwaqo esikuyisa enkabeni yedolobha.
IMamangakis Apartments yibhizinisi lomndeni futhi sitshala ekwanelisekeni kwamakhasimende.
Zizwe ukhululekile ukusithinta ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ongase uludinge!
4.51(147 okushiwo abanye)
I-Koubes igama lendawo yangakithi. Kusentshonalanga yenkaba yedolobha. Le ndawo ibusiswe ngokuba nebhishi elihle elincane, elicishe langasese kubahlali bayo. Le ndawo futhi idume kakhulu ngenxa yezindawo zokudlela ezihamba phambili nezindawo zokuphumula. Kukhona abambalwa kakhulu esingabalula. Zama indawo yethu yokudlela eseduze noma i-PrimaPlora (150m ezansi nomgwaqo) zombili zinhle kakhulu!
Iminyango emibili ezansi uzothola i-Galera enye i-taverna enhle kakhulu, ethengeka kakhulu enendawo ebabazekayo nezitsha ezihlwabusayo.
I-Cavo (eduze ne-PrimaPlora) iyibha ye-lounge & yokudlela, uhlobo lweklabhu yabantu bendawo ukuze baphuze kamuva ntambama noma ngemva kwesikhashana kwamabili.
Ngaphesheya komgwaqo ungathola indawo yekhofi yama-croissants, amakhofi njll.
Uma uya ngasenkabeni yedolobha ungathola i-“Noulis” elinye ikhofi nokudla okulula endaweni enconyelwa kakhulu. Ukuqhubeka kancane (250m ukusuka ezindlini zethu) kukhona imakethe encane yezinto eziyisisekelo (njengegrosa, ubisi nephepha lasendlini yangasese)
Uma kwenzeka udinga isuphamakethe enkulu ungaqhubeka uye ngasenkabeni yedolobha futhi ngaphambi nje kokuthi ungene kuyo uzobona isakhiwo esikhulu kwesokudla sakho okuyi-SYNKA super market egcizelela kakhulu emikhiqizweni yasendaweni. Noma ungaya ngasentshonalanga ukusuka ezindlini zethu futhi ukhuphuke (cishe ama-700m) lapho uzothola khona i-Lidl s/m (okungcono uma unemoto). Umshini we-ATM wasebhange uyatholakala eNoulis nomunye kancane ngaphambi kokufika enkabeni yedolobha.
Indawo yethu inenani elikhulu leholide lakho. Hhayi kude nenkaba yedolobha kodwa kude ngokwanele ukugwema izixuku nethrafikhi. Ulungile ogwini lolwandle unomhlathi odonsa amehlo olwandle, useduze kakhulu nesikhumulo samabhasi esikhulu sedolobha (uhambo nje oluyimizuzu eyi-10) futhi ekugcineni useduze nomgwaqo omkhulu wesiqhingi okunikeza ithuba lokuhlola isiqhingi sonke ngokushesha futhi kalula. ngokwanele ukugwema ithrafikhi yendawo.
Njengosokhaya ngihlale ngizimisele ukusiza nokwamukela izivakashi zami. Izikhathi eziningi lokhu kuhamba kanjani. Kodwa ngenxa yezindaba zomndeni noma izindaba zebhizinisi angihlali ngikhona emafulethini. Nokho umama ohlala esakhiweni esisodwa naye uzimisele ukusiza ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho isevisi yemiyalezo ye-airbnb yinto engiyilandela cishe amahora angama-24 ngakho ukuxhumana nami kulula. Uma ufunda izibuyekezo ezivela kubavakashi bami uzoqonda ukuthi ngikwazisa kangakanani ukuba khona kwezivakashi zami endaweni yami.
Njengosokhaya ngihlale ngizimisele ukusiza nokwamukela izivakashi zami. Izikhathi eziningi lokhu kuhamba kanjani. Kodwa ngenxa yezindaba zomndeni noma izindaba zebhizinisi angihlal…